Iflethi okanye indlu ekwicomplex enembonakalo entle - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enembonakalo entle
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguIsabelle
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-12 Epr.
Iflethi yamaphupha eLipperswil iphakathi kweenduli zangaphambi kweLake Constance. Kwindawo yegalufu eyi-18-hole kunye ne-9-hole kunye nendawo yempilo ye-2000 m2 singumdala wegalufa kunye nabantu abathanda impilo. Indawo yezempilo enepuli, igumbi lokuzilolonga, i-shirlpool ne-sauna ingasetyenziswa simahla. Ukuncitshiswa kwemali yegalufa kuyafumaneka! Kwiintsapho, yindawo entle: I-Conny Land (ipaki yokuzonwabisa) ikude ngeekhilomitha eziyi-1 ukusuka kuthi.
Yeyona ndawo ibalungeleyo abantu abadlala igalufa, iindwendwe ezempilo, iintsapho nabantu abathanda ezemidlalo. Abathandi bezilwanyana bamkelekile.
Qala ngosuku ngesidlo sakusasa esiqukiweyo nesityebileyo (ukutya okulungiselelwe ngokutsha amaqanda ekhitshini lokubonisa). Emva koko ukuhamba ngebhayisekile, ukunyuka intaba, ukudlala igalufa okanye ukonwabela nje imini kwindawo esempilweni - yonke into iyenzeka. Ngokomzekelo, yiya kwisiqithi saseMainau, kwisiqithi iReichenau, eMeersburg, kwiRhinefall ukuya eSchaffhausen okanye kuhambo lweShoppin oluya eKonstanz. Yonke into kulula ukuyifikelela - enoba zizithuthi zikawonke-wonke okanye ngemoto. Ngokuhlwa, unokuphelisa imini kunye nathi kwivenkile yokutyela kunye namanqaku ayi-14 eGaultMillau. Ibhari nayo ingatyelelwa - sijonge phambili ukukubona!
Iflethi yamaphupha eLipperswil iphakathi kweenduli zangaphambi kweLake Constance. Kwindawo yegalufu eyi-18-hole kunye ne-9-hole kunye nendawo yempilo ye-2000 m2 singumdala wegalufa kunye nabantu abathanda impilo. Indawo yezempilo enepuli, igumbi lokuzilolonga, i-shirlpool ne-sauna ingasetyenziswa simahla. Ukuncitshiswa kwemali yegalufa kuyafumaneka! Kwiintsapho, yindawo entle: I-Conny Land (ipaki yokuzonwabisa) ikude…
Iintsuku eziyi-7 e Wäldi
4.86 (iingxelo zokuhlola 7)
Ijikelezwe luhlaza - uxolo lwengqondo kunye nendawo entle ejikelezwe yi-Swiss Alps panorama. SiseLipperswil, kwi-canton yaseThurgau, phakathi kwe-pre-Alpine hill chain kunye neLake Constance, kwiDreiländereck Switzerland, eJamani naseAustria. Umgama ukuya eJamani ziikhilomitha eziyi-14. Iindawo ezahlukahlukeneyo ezikufutshane neLake Constance zikulindile!
Ujoyine nge- 2022 Meyi
Siyakuvuyela kakhulu ukuba kwindawo yokwamkela iindwendwe ukususela ngo 06: 30 ukuya kutsho ngo-24: 00.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wäldi